MEBTALK လေးပါ - နည်းပညာ
2/14/2013 11:01:00 PM နည်းပညာ No comments
MEB TALK လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်..................
MEB Talk2မူရင်းဆိုဒ်လင့် က ဒီမှာသွားနိုင်ပါတယ်.. ဒါလေးအသုံးဝင်ပုံ အသုံးပြုပုံနဲ့အထာကျတာလေးတွေ ထင်ကြေပေးမယ်နော်..
တော်တော်များများ သုံးနေကြတဲ့ MPT က လုပ်တဲ့ ytalk က ကောင်းတယ် ဈေးသက်သာတယ်လို ပြောကြတာနဲ့ ပြီးလို သုံးကြည့်ပါတယ် အဆင်သိပ်မပြေဘူးလို့ပြောပါတယ်
. (mpt ) ကအကိုတွေ အမတွေကို အားနာပါတယ်..
မြင်တာပြောတာပါ.. အခုချိန် ဖွင့်လိုကိုမရတော့ပါဘူး connection မကောင်းလိုလဲမဟုက်ဘူးဗျ လုံးလုံးကြီးကိုမပွင့် တာတဲ့... သုံးနေကျ pfingo ကို ပြန်သုံးနေရပါတယ်တဲ့..။ အဲဒါ စိတ်ပေါက်တာနဲ့ ဟို ကလိ ဒီကလိ ဟို၇ှာဒီရှာနဲ သွားတွေ့ တာ.. သိပြီးနေလောက်သူသိမှာပါ မသိသေးတဲ့သူ ရှိအုံးမှာပါ.. MEB Talk2ဆိုတာလေးကို ကလိပြီးစမ်းသုံးကြည့်ပါတယ်.. လိုင်းတော်တော်မကောင်းဘူးဗျ နိုင်းဆိုဒ်တွေတောင် လင့်ဘာတွေ အစုံ အလင်မပေါဘူး fb ဆိုလဲ ဘာမှကိုမမြင်ရတာ ဖွင့်ကြည့်ပြီးဖုန်းခေါ်ကြည့်တာ ရတယ်ဗျာ လိုက်ကကြည့်နေတာဘဲ... လိုင်းအနည်းငယ်ရှိတာနဲ သုံးလိုရတယ်ဗျာ.. ခိုက်သွားတာဘဲ...အဟီး.. အသုံးပြုပုံက နာလည်မယ်ဆိုရင် ခဏက ဆိုဒ်လင့်အပေါမှာပေးထားပါတယ် အဲက သွားပြီး Register လုပ်နိုင်ပါတယ်..။ တစ်ကယ်ကို အသုံးပြုချင် လုပ်ချင်ပြီး လုပ်ရကိုင်ရခက်စေမဲ့ အကိုအမများအတွက် ရည်ရွှယ်ပြီး အသေးစပ်ရေးပြသွားပါမယ်..။ ဒီမှာအစဉ်သင့်လုပ်နိုင်အောင် လင့်လေးတွေ ပြသွားပါ့မယ်.. အရင်ဆဲုံးဒီလင့်ကိုသွားပြီး Register လုပ်လိုက်ပါ.. ပုံ(၁) ပုံတစ်လို တွေမြင်ရပါလိမ်မယ်....... ပြီးရင် လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်စွတ် ပြီး Register လုပ်လိုက်ပါ.. ရလာမဲ့ မိမိအကောင့်က ဥပမာ user name မှာ nayminthu လိုပေးထားမယ်ဆိုရင်.. မိမိ အကောင့် ရလာမှာက nayminthu*mebtalk2 ဆိုပြီးရလာမှာပါ..။ မိမိအကောင့်ရပြီးဆိုလျင်... MEB Talk software ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ.. ဒီလင့်မှာ သွားဒေါင်းလိုက်ပါ..။ pc အတွက် ဒေါင်းလိုရတာလေးကို မိမိ ကွန်ပြုတာမှာဆွဲဗျ အောက်ကပုံ(၂) လို...မျိုး.. ပြီးတာနဲ့ ခဏက ဖွင့်လိုရထားတဲ့ အကောင့် user name နဲ့ password ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ ... ပုံ(၂) အပေါက ပုံအတိုင်း ဆို မိမိ အကောင့်ဖြည့်ပြီုးok နိတ်လိုက်ယုံပါဘဲ.. မိမိအကောင့်ပွင့်လာရင် အောက်ကပုံ(၃) လိုမျိူး တွေရပါလိမ်မယ်..
ပုံ(၃) အပေါထိတ်က မျှားထိုးပြထားတာက
မိမိ အကောင့်အတွင်း ပိုက်ဆံ ကြည့်တဲ့နေရာပါ
အောက်မှာ ဖုန်းခေါ်မည် နေရာပေါ့.
Center 1 Room No. 4032, Taw Win Center Level 3, Pyay Road
Phone +95 1 8600072, +959450057681
မှတ်ချက်။ ။username နေရာမှာ minchitthu(*mebtalk2 ) ဒါလေးမမေ့ပါနဲ့လို့ ပြောပါရစေ.....